Mandray ny fiaramanidina Airbus A380 ny seranam-piaramanidina Ivato, tantanin’ny Ravinala Airports - Ravinala Airports
Mandray ny fiaramanidina Airbus A380 ny seranam-piaramanidina Ivato, tantanin’ny Ravinala Airports
Mandray ny fiaramanidina Airbus A380 ny seranam-piaramanidina Ivato, tantanin’ny Ravinala Airports : voalohany eto amin’ny tantaran’i Madagasikara.
Mampiasa ny fiaramanidina Airbus A380 ny kaompania Air Madagascar, miantoka ny zotra iraisam-pirenena Madagasikara-Frantsa.
Fiaraha-miombon’antoka amin’ny kaompania Air Austral ny fampiasana ity fiaramanidina Airbus A380 izay nampanofain’ny kaompania Hifly ity, ary mampifandray, araka ny fandaharam-potoana, an’i Madagasikara sy Frantsa nanomboka ny 30 jona hatramin’ny 1 jolay 2019.
Ahafahan’ny orinasa Ravinala Airports, izay mitantana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, sy ny mpisehatra samihafa eny an-toerana mitondra ny anjara-birikiny sy ny fahaiza- manaony avy, ny fandraisana io fiaramanidina io.
Miantsona ao amin’ny sokaji-pandraisana “Tarmac 2” ny Airbus 380, ao anatin’ny fotodrafitsara vaovao naorin’ny Ravinala Airports, manoloana ny seranam-piaramanidina vaovao handray ireo zotra iraisam-pirenena. Marihana fa mbola tsy tafapetraka ny tetezam-pifamoivozana natao ifamezivezen’ny mpandeha. Misy, noho izany, ny fiarabe manokana mitatitra ny mpandeha avy any amin’ny zotram-piaramanidina ao amin’ny Tarmac 2, mankany amin’ny efitrano malalaka natokana ho azy ireo. Toy izany ihany koa ho an’ireo mpandeha hiondrana amin’ny fiaramanidina eo amin’ny Tarmac 2.
Mitentina 23 tapitrisa euros ny fampiasam-bolan’ny Ravinala Aiports, nananganana arabe vaovao hiantsonan’ny fiaramanidina sady handraisana ny mpandeha (Tarmac), novitaina ny taona 2018 teo.
Mahatratra 70.000 taonina ny tara nanamafisana ny arabe fiantsonan’ny fiaramanidina, afaka mandray ny Airbus A380 sy ny fiaramanidina voasokajy “code F” rehetra. Hanatsara sy hampivoatra ny seranam-piaramanidina eny Ivato manontolo sy ny tolotra omena ny mpanjifa (izay hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena), ny fisian’io fotodrafitrasa goavana io.